Ohatrinona ny vola azonao amin'ny Google AdSense? - Learn Expert Blogging
Ohatrinona ny vola azonao amin'ny Google AdSense?
Afaka mahazo zavatra mora foana ianao 50 Dolara ho 1000+ dolara isan'andro avy amin'ny Google AdSense. Mba hahatratrarana an'io tanjona io na mihoatra, tokony hanana fifamoivoizana kalitao ianao amin'ny fanatanterahana paikady mety.
Satria ny Google AdSense dia vokatra avy amin'i Google. Doka an-tapitrisany dolara ataon'ny mpivarotra amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny google. Mandoa an'i Google amin'ny doka izy ireo mba hitondrana ny serivisy ho an'ny besinimaro.
Google dia mamela ny mpanonta hampiseho doka amin'ny tranokalany ary ho setrin'izany Google ary koa ny tompona tranokala mahazo vola rehefa misy manindry dokam-barotra..
Misy tranokala an-tapitrisany amin'ny Internet. Avy amin'izy ireo, maro no manana mpitsidika tsara isan'andro.
Eto i Google dia miasa ho mpanelanelana. Raha manana sehatra fampiantranoana tena toa ny WordPress ianao, ny 30% mankany amin'ny Google ny ampahany amin'ny vola miditra, ary ny sisa 70% dia anao.
Etsy ankilany, raha mampiasa bilaogera fampiantranoana Google manokana blogger.com ianao, amin'ity tranga ity dia mitazona ny Google 40%.
Vola amin'ny alàlan'ny AdSense
Ohatrinona no azonao atao
Tsy misy fitsipika sarotra sy haingana aorian'ny fitsidihana firy amin'ny tranonkalanao, ohatrinona ny vola azonao amin'ny AdSense? Miankina tanteraka amin'ilay lohahevitra hoe inona no lohahevitra soratanao.
Ataovy mazava kokoa, ankapobeny, Ny teny mifandraika amin'ny siansa ara-pitsaboana dia lafo isan-tsindry. Manomboka amin'ny 1 ny 2 dolara ary mandeha mora foana 50 dolara isaky ny kitiho. Midika izany fa mitsidika ny tranonkalanao ny mpitsidika sasany, vakio ny lahatsoratrao ary kitiho ny dokam-barotra raha te hampiasa ilay serivisy, hanana ianao 70% amin'ny CPC manontolo, ary ny ambiny 30% dia eo am-paosin'i Google.
Ohatra, Nahita olona maro nitady tamin'ny Internet ianao “fitsaboana famindrana volo”. Raha manoratra lahatsoratra amin'ity lohahevitra manokana ity ianao. Ho hitanao fa mandeha manodidina ny CPC 7 ny 10 dolara isaky ny kitiho. Raha mahazo tsindry marobe avy amin'ny mpitsidika ianao, afaka mivezivezy mora foana ianao $50 isan'andro.
Etsy ankilany, mizara ny zavatra niainako manokana, rehefa nanomboka ny diako voalohany tsy nisy fahalalana aho, Tadidiko fa izany no loza lehibe indrindra. The reason because I wrote articles on the topic with no CPC. Ny mpivarotra dia tsy nandoa ny teny fanalahidy nosoratako ho an'ny kendrena amin'ny mpihaino. Momba ny tononkalo eo an-toerana. Azo antoka fa mihomehy ianao amin'izao fotoana izao. Izaho dia manana fahalalana tsara momba azy io amin'ny ankapobeny fa tsy nisy tombony raha tsy manova izany ho vola tsara ianao.
Nanoratra saika aho 50 miampy lahatsoratra taty aoriana dia nahita fa tsy mampidi-bola mihoatra ny 5 dolara isam-bolana. Tena nisy ny fahadisoam-panantenana. Izany dia satria tsy fantatro ny zava-misy fa mila mitandrina ianao hoe ohatrinona ny teny fanalahidy mandoa anao. Raha tsy inona izany, dia tokony avelanao io teny lakile io satria tsy mamoaka vola be avy amin'ny Google AdSense.
Manolotra sosokevitra manokana avy amin'ny zavatra niainako manokana aho, tokony hitady CPC teny lakile ianao alohan'ny hanoratana lahatsoratra. Mandehana amin'ny fikarohana teny lakile izay tokony ho fahalalana betsaka hosoratanao 100 + lahatsoratra tsy tapaka. raha manomboka lohahevitra ianao fa tsy manana fahalalana betsaka dia midika izany fa hiafara tsy ho ela ianao.
Tsy maintsy mamaky: Ahoana ny fomba fananganana tranokala bilaogy ahazoana vola be
Ny tranonkala na ny mpanoratra bilaogy dia tsy miraharaha ny hafainganan'ny tranonkala. Hadisoan'izy ireo izany. Tokony ho fantatr'izy ireo ny zava-misy fa ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala no manandanja indrindra rehefa mahazo vola amin'ny Google AdSense.
Google AdSense dia manampy anao hahazo vola amin'ny fampisehoana sora-baventy isan-karazany amin'ny tranokalanao. Izy io dia karazana kaody izay ao ambadiky ny tranokala rehefa misy mitsidika ny tranonkalanao. Ny kaody script dia mandeha isaky ny fotoana ary mampihena ny fotoana fanokafana tranokala.
ankapobeny, tokony ho ao anaty ny fotoana 2 ny 3 segondra fa rehefa mametraka kaody script ianao, inona no mitranga dia manomboka maka 10 ny 15 segondra hanokatra ny tranokala. Amin'izay fotoana izay, ny mpampiasa dia tsy te hijanona ela. Tsindrio ny bokotra aoriana, miverina indray, ary mifindra amin'ny tranokala hafa.
dia, Ahoana no ahafahanao miteraka vola? raha tsy mitsidika ny tranonkalanao ny mpitsidika. Tsy mahita na inona na inona izy ireo ao anatin'ny fotoana eo ho eo. Azo antoka fa ny fahaverezan'ny vola miditra amin'ny alàlan'ny Google AdSense.
Ho an'ity, mila fampiantranoana entana haingana ianao, manana valinteny mpizara tsara izany. Tato ho ato Bluehost dia manome serivisy tena tsara. Tsy izany ihany fa koa, manolotra fiasa fanampiny toa azy ireo izy ireo SSL taratasy fanamarinana ary bebe kokoa izay mitana andraikitra lehibe amin'ny laharan'ny Google ankehitriny sy amin'ny ho avy.
Sarotra ve ny mahazo vola amin'ny Marketing Affiliate?
Previous PostSarotra ve ny mahazo vola amin'ny Marketing Affiliate?
Next PostAzonao atao ve ny manao marketing marketing miaraka amin'i AdSense?
Afaka mahazo vola amin'ny Internet ve ny mpianatra?
Ny marketing amin'ny Affiliate Amazon ve mendrika izany?